नेपालका टप टप सेलेब्रिटीले कुन कार चढ्छन ? यि हुन् करोड हाराहारीका कार चढ्ने सेलिब्रिटी – Khabaarpati
नेपालका टप टप सेलेब्रिटीले कुन कार चढ्छन ? यि हुन् करोड हाराहारीका कार चढ्ने सेलिब्रिटी
January 2, 2021 January 2, 2021 goodmamLeaveaComment on नेपालका टप टप सेलेब्रिटीले कुन कार चढ्छन ? यि हुन् करोड हाराहारीका कार चढ्ने सेलिब्रिटी
केही वर्षअघिसम्म सिनेमा अभिनय, निर्माणबाट जीविकोपार्जन गर्न गाह्रो परिरहेको गुनासो गर्ने फिल्म सेलिब्रेटीहरू पछिल्लो समय यो क्षेत्रमा नाम र दाम दुवै पर्याप्त रहेको बताउने गर्छन् । नेपाली फिल्म निर्माणमा आएको तीव्रता, फिल्म तथा कलाकारको स्वदेश तथा विदेशमा मागका कारण पनि सेलिब्रेटीको जीवनशैली महँगो देखिएको छ ।अहिले चल्तीमा रहेका अधिकांश सेलिब्रेटी आफ्नै निजी सवारीसाधनमा हुइँकिने गर्छन् ।
केही वर्षअघिसम्म सुटिङकै गाडीमा ओहोरदोहोर गर्ने सहकलाकार पनि अचेल नयाँनयाँ ब्रान्डका कारका मालिक बनेका छन् । फिल्म उद्योगमा आफ्नै सवारीसाधन नभएका कलाकार भेट्न मुस्किल पर्ने गर्छ, अहिले ।पुराना कलाकार कृष्ण मल्ल, भुवन केसी, शिव श्रेष्ठ, राजेश हमाल, दीलिप रायमाझी, करिश्मा मानन्धर, रेखा थापा, झरना थापादेखि लिएर अहिलेका चलायमान दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला, जितु नेपाल, अनमोल केसी, प्रदीप खड्का, पल शाह, प्रियंका कार्की, पूजा शर्मासम्मले आफैँ कार कुदाउने गर्छन् ।
कार फेरिफेरी चढ्ने अभिनेतामा अग्रस्थानमा आउँछन् भुवन केसी । उनी हिरो बन्नुअघि नै कार चलाउने गर्थे । ‘फिल्ममा आउनुअघिदेखि नै गाडी चढ्ने गरेको हुँ,’ भुवन भन्छन्, ‘बजारमा नयाँ मोडलको कार आउनेबित्तिकै खरिद गर्ने गरेको छु ।’ भुवन अचेल हुन्डाईको क्रेटा चढ्छन् । तीन वर्षअघिसम्म उनी ४७ लाख रुपैयाँ पर्ने किया स्पोर्टेज चढ्थे । आफू गाडीका सौखिन भएकाले फेरिरहने तर्क उनको छ ।भुवनपुत्र युवास्टार अनमोल भने बाइकका सौखिन हुन् । उनीसँग १५ लाख मूल्य पर्ने दुइटा महँगा बाइक छन् ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
उनी कहिलेकाहीँ बाबुको कार लिएरसमेत हिँड्ने गर्छन् । चर्चित हास्य अभिनेता तथा निर्माता दीपकराज गिरीले कार हाँक्न थालेको आठ वर्ष भयो । उनको सुरुको कार हुन्डाई आई टेन थियो । दीपकराजले त्यसपछि सुजुकी स्विफ्ट कुदाए र पछिल्लो समय उनी टाटा हेक्जाका मालिक भएका छन् । रहरभन्दा पनि आवश्यकताले कार चढेकोे जिकिर दीपकराजको छ । भर्खरै लिएकाले आफू तत्काल नयाँ कार किन्ने योजनामा नरहेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘खल्ती गरम भयो भने पो नयाँं कारको चाहना हुन्छ । म अहिले टाटा हेक्जाप्रति नै खुसी छु ।’
अभिनेत्री तथा निर्मात्री रेखा थापाले कार हाँक्न थालेको दशक पुगिसक्यो । मारुती अल्टोबाट सुरु भएको रेखाको कारयात्रा त्यसपछि जेट्स, टेरियस हुँदै अहिले निसानको टेरानोमा आइपुगेको छ । बजारमा आएका नयाँ मोडलका कार हाँक्न मन पराउने भएकाले गाडी फेरिरहने उनी बताउँछिन् । ‘एउटा गाडी दुई–अढाइ वर्ष चलाएपछि नयाँ किन्न मन लाग्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘आफैँ हाँक्ने बानी भएकाले अरूले चलाएको कारमा बस्न मन लाग्दैन ।’ काठमाडाै‌ उपत्यकाभित्र आफैँ हाक्ने भए पनि मोफसलको यात्रामा भने उनी कार प्रयोग गर्दिनन् ।गाडी फेरिफेरी चढ्ने अर्का अभिनेता हुन्, धीरेन शाक्य ।
हिरो बन्नुअघि नै कार कुदाउने गरेका धीरेन आफूले अहिलेसम्म कति गाडी चेन्ज गरेँ, गन्ती नै नभएको दाबी गर्छन् । पहिलोपटक मारुती कार चढेका उनी पछिल्लो समय टोयटा यारिस चढ्छन् । ‘नयाँ मोडल आयो कि किन्न मन लागिहाल्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘समयअनुसार चल्नै प-यो नि ।अभिनेत्री, निर्मात्री तथा निर्देशक झरना थापाले आफैँ कार चलाउन थालेको त झन्डै डेढ दशक पुग्न लाग्यो । सुरुमा टोयटा कार कुदाउने गरेकी उनले त्यसपछि पेरेडुवा चढिन् । वेलावेलामा गाडी फेरिरहन मन लाग्छ, उनले अहिलेसम्म कति गाडी फेरें भन्ने हेक्का नभएको बताउँछिन् । झरना पछिल्लो समय टेरियस चढ्छिन् ।नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
हास्य अभिनेता जितु नेपालले कार हाँक्न थालेको आठ वर्ष भइसक्यो । उनले सुरुमा मारुती ८०० लिएका थिए । त्यसपछि उनी अल्टो, आइटेन, स्विफ्ट हुँदै हाल आई ट्वान्टी एक्टिभका मालिक भएका छन् । पाँचौँ कार कुदाइरहेका जितु तत्काल कार फेर्ने सोचमा छैनन् । अहिलेकी चर्चित हिरोइन पूजा शर्माले पनि कार हाँक्न लागेको तीन वर्ष भइसक्यो । सुरुमा उनी ग्रान्ड आइटेन कुदाउँथिन् । हाल उनी इको स्पोर्टस् चलाउँछिन् ।
अर्की चर्चित हिरोइन वर्षा सिवाकोटी पनि कारधनी भएकी छिन् । उनले झन्डै एक महिनाअघि होन्डा सिटी कार किनेकी हुन् । कार किन्नुअघि उनी स्कुटरमा कुद्ने गर्थिन् । सहज जीवनशैली अपनाउन कार किनेको उनी बताउँछिन् । भर्खरै किनेकाले उनी आफैँले भने कुदाउने गरेकी छैनन् । भन्छिन्, ‘हात बसाल्दै छु । केही समयपछि आफैँ कुदाउनेछु ।पछिल्लो समय आफ्नै कार नभएका हिरो–हिरोइन, गायक–गायिका तथा मोडल भेट्न गाह्रो पर्छ । फिल्म, मोडलिङ, विदेश प्रोग्राम, स्वेदश प्रोग्राम तथा म्युजिक भिडियोबाट समेत मनग्गे आम्दानी हुने भएकाले अलिकति चलायमान कलाकारलाई महँगो जीवनशैली व्यतित गर्न असहज छैन ।
भुवन केसी काण्डमा बढी बकबक गरेको भन्दै प्रेमीले छोडिदिए साम्राज्ञीलाई
काठमाडौं । युवा पुस्ताले निकै रुचाएकी नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह २ वर्षदेखि देवांश राणासँग प्रेममा थिइन् । अहिले उनीहरुको सम्बन्ध टुटेको छ
चलचित्र ‘ड्रिम्स’बाट नेपाली चलचित्रमा भित्रिएकी साम्राज्ञी र देवांशको प्रेम बालीमा खिचिएका तस्बिरले निकै भाइरल भएको थियो। उक्त तस्बिरमा छताछुल्ल रुपमा देख्न पाइन्थ्यो ।
त्यसपछि साम्राज्ञीले एकपछि अर्को गर्दै प्रेमी देवांशसँगका तस्विर सार्वजनिक गर्दै गइन् । कहिले नेपालगन्ज, कहिले पोखरा त कहिले बालीमा पुगेर साम्राज्ञीले आफ्नो प्रेम छताछुल्ल पारिन् ।
उनीहरु त्यसपछि कयौं कार्यक्रमहरुमा पनि सँगै देखिएको यो जोडीको विवाह हुने चर्चा समेत सुरु भएको थियो । प्रेममा रहँदा साम्राज्ञी र देवांशले एक म्युजिक भिडियोमा सँगै अभिनय समेत गरे । जुन गीत साम्राज्ञीकी आमाले गाएकी थिइन् । यी दुईबीचको प्रेम सम्बन्ध टुटेको खबर सार्वजनिक भएको छ
झण्डै ३ महिनादेखि साम्राज्ञीका कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमा देवांशको उपस्थिति नदेखिनुले पनि यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ । यति मात्रै होइन साम्राज्ञीले सामाजिक सञ्जालमा हालेका देवांशसँगका पुराना धेरै फोटा पनि हटाएकी छन् ।
यि हुन् नयाँ बर्षको पहिलो दिन विश्वभर जन्मिएका विश्वका ३ लाख ७१ हजार भाग्यमानी शिशु, नेपालमा कति जन्मिए ?
नयाँ बर्ष सन् २०२१ को पहिलो दिन जनवरी १ का दिन संसारभरी तीन लाख ७१ हजार ५०४ जना जन्मिएको युनिसेफले जनाएको छ ।
फिजीमा सन् २०२१ को पहिलो शिशुको जन्म हुन्छ भने अमेरिकामा यो वर्षको पहिलो दिनको अन्तिम शिशुको जन्म हुनेछ ।
संसारभरी जन्मेका शिशुमध्ये ५० प्रतिशत शिशुहरु १० देशमा जन्मने बताइएको छ । जसमध्ये भारतमा ५९ हजार ९९५, चिनमा ३५ हजार ६१५, नाइजेरियामा २१ हजार ४३९, पाकिस्तानमा १४ हजार १६१, इन्डोनेसियामा १२ हजार ३३६, इथोपियामा १२ हजार ६ जना, अमेरिकामा १० हजार ३१२, इजिप्टमा ९ हजार ४५५, बंगलादेशमा ९ हजार २३६ र कंगोमा ८ हजार ६४० जना शिशुहरुले नयाँ वर्षको पहिलो दिन जन्म लिने युनिसेफले जनाएको छ ।
युनिसेफले सन् १९५२ देखि बालबालिकाको अधिकार र कल्याणका लागि विभिन्न देशमा काम गरिरहेको छ ।
December 24, 2020 Khabar Pati